Ma dhabaa in diyaaradihii dagaalka Turkiga ee Armenia lagu jabiyay la geeyay Somaliya? – Idil News
Ma dhabaa in diyaaradihii dagaalka Turkiga ee Armenia lagu jabiyay la geeyay Somaliya?
Ma dhabaa in diyaaradihii dagaalka Turkiga ee Armenia lagu jabiyay la geeyay Soomaaliya?
10 Disembar 2021.
Diyaaradda TB2 oo lagu soo bandhigay dhoolatus ay sameynayay ciidammada Ukraine oo Turkiga ka so iibsaday diyaaraddan.
Erdogan oo shaaca ka qaaday diyaaradda bilaa duuliyaha ee hubeysan ee uu dalkiisa sameystay
XIGASHADA SAWIRKA,TURKISH PRESIDENCY